Tommy's Love Stories: Love Trip - Part 1
ကားမှန်ပေါ်မှ စာလုံးများကို ဖတ်ရင်း၊ မျက်လုံးက သူငယ်ချင်းတွေကို ရှာမိသည်။
“အငယ်လေး.. သူငယ်ချင်းတွေ ရောက်ပြီလား” မေမေက ကားကို ပါကင်ထိုးဖို. နေရာရှာရင်းမေးသည်။
“မသိဘူးမေ.. သူတို. မရောက်ကျသေးဘူးလား မသိဘူး… အချိန်လဲနီးတော့နေပါပြီ”
“မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားဂိတ်မှာ ဆုံမယ်လို. အိအိ နဲ့ အ၀င်းကို ပြောပြီးသား၊ ဇာဇာနဲ့ ဖြိုး၂ယောက်ဘဲ မြေနီကုန်းမှာ စောင့်စီးမှာ”
“ကဲ..ဒါဆိုလဲ စီးရမယ့်ကားရှာကြစို.၊ ဟိုမှာ ကားတွေက ၆စီးလောက်ရှိတယ်…” မေမေကပြောရင်း ကားပေါ်မှဆင်းကာ နောက်ဖုံးမှ အထုပ်များသွားယူနေပြီ။
ဒီနေ့ည စာမေးပွဲအပြီး ကျိုက်ထီးရိုးကို သွားလည်ဖို. အိမ်ကလူကြီးတွေဆီက ခွင့်ပြုချက်ရယူ ထားကြတာဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း သူငယ်ချင်း ၇ ယောက်။ အိအိနဲ့ အ၀င်းက ကျောင်းပြီးလျင် လက်ထပ်ကြမယ့် စုံတွဲ၊ ဇာဇာနဲ့ ဖြိုးကလဲ ၂ဖက်မိဘ အသိပေးပြီး တွဲနေကြသူတွေ၊ ကျန်တာကတော့ မိစံ၊ သူသူ နှင့် ကျွန်တော်။ စုစုပေါင်း မိန်းကလေး ၅ယောက်၊ ယောကျာ်းလေး ၂ယောက်။ ပုံမှန်ဆိုလျင် ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ညအိပ်ခရီး လွှတ်မှာမဟုတ်ပေမယ့်၊ ဒီသူငယ်ချင်းတွေကတော့ ၅တန်းကတည်းက လည်ပင်းဖက်ပေါင်းလာခဲ့သူတွေ။ ခုဘဲ တတိယနှစ်ရောက်နေကြပြီဆိုတော့၊ စာမေးပွဲပြီးတုန်း ပျော်ချင်ပါးချင်တာကို မိဘတွေက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လိုက်လျောခဲ့သည်။
ခက်နေတာက ချစ်သူငယ်ချင်းများက ခုထိမလာကြသေး။ သူတို.အားလုံး အ၀င်းကားနှင့် တူတူလာကြမည်ပြောသည်။ လာလျှင်တော့ တစ်အုပ်စုလုံး တူတူရောက်လာကြမှာ သေချာသည်။
ကျွန်တော်လဲ ကားပေါ်က မြန်မြန်ဆင်းရင်း မေမေ့ကို အထုပ်ဝိုင်းကူချပေးသည်။
“အငယ်လေး… ဟိုရောက်ရင် ပေါက်ကရလေးဆယ် လျောက်မပြောနဲ့၊ မတည့်တာတွေ မစားနဲ့နော်..” အငယ်ဆုံးမို.လို. တစ်အိမ်လုံးက နာမည်မခေါ် အငယ်လေးဟုသာ ခေါ်ကြသည်။ ခုလဲ အငယ်ဆုံးကို မေမေက စိတ်ပူပြီး တောက်လျောက်မှာနေသည်။
အင်းပေါ့လေ.. ပထမဆုံး မိသားစုမပါဘဲ ထွက်တဲ့ခ၇ီးဆိုတော့လဲ စိတ်ပူမှာပေါ့။
“ဟုတ်ပါ..စိတ်ချပါ မေမေရဲ့… ကျိုက်ထီးရိုးက မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာမှ မဟုတ်တာ”
“အေးပါ… မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာမဟုတ်မှန်းတော့ သိတာပေါ့.. အရင်က မိဘတွေနဲ့ မိသားစုနဲ့သွားတာလေ၊ အခုဟာက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့၊ အကုန် ကလေးတွေချည်းဘဲ၊ တခုခုဆို ဘယ်သူမှ ဘာမှ လုပ်တတ်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့.. “
“ငလင်း…အဲ…လင်းလင်း… ငါတို. ဒီမှာဟေ့” အ၀င်းက ကျွန်တော့်ကို လှမ်းအော်သည်။ မေမေ့ကိုမြင်တော့ ငလင်းဟုခေါ်ရာကနေ လင်းလင်းဟု ပြောင်းခေါ်သည်။ မဟုတ်ရင်..မေမေက သူ.ကိုပါ ဆုံးမစကားတွေ ပြောနေမှာ စိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမှန်တော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေအကုန် မေမေ့ကိုကြောက်သည်။ မေမေက အရင်က အထက်တန်းကျောင်းဆရာမလုပ်ခဲ့သူတစ်ဦး၊ ရုပ်တည်ပြီး ဆုံးမစရာရှိလျင် ဘယ်သူ.သားသမီးရယ်လို.မဟုတ် ကလေးတိုင်းကို သူ.အတန်းသားလို သဘောထားသူဖြစ်သည်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို. တစ်ဖွဲ.လုံး မေမေ့ကို ချစ်ကြောက်ရိုသေကြသည်။
အစ်မအကြီး၂ယောက်ကတော့ မေမေထားသော လိုချင်သော စာတော်၊ မိန်းမပီပီသသ အိနြေရှိရှိလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ အငယ်ဆုံးကျွန်တော်ကတော့ ခပ်ဆိုးဆိုး၊ ဂျစ်တိုက်တိုက် Tomboy လေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် မေမေ့ရှေ.မှာတော့ ကျွန်တော်လဲ မှင်သေရသည်ပေါ့။
ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေက ပြောတာ မင်းက အမေရှေ.ကျ မျက်နှာသေလေးနဲ့ ကွယ်ရာကျတော့ ငပြူးငပြဲ…
“အေး… ငါကားရှာတွေ.ထားတယ်..နံပါတ်၃ကားက ငါတို.စီးရမယ့်ကား” ကျွန်တော်လဲ ၀မ်းသာအားရ အထုပ်ဆွဲရင်း သူငယ်ချင်းတွေဆီ ပြေးမိသည်။
ဒါတောင် မေမေက..”ဟဲ့ ဖြေးဖြေးသွားလေ.. ချော်လဲဦးမယ်..”
ခုံတွေရှာပြီး၊အထုပ်တွေတင် နေရာယူအပြီးမှာတော့ ဘေးမှန်တံခါးကိုဖွင့်ရင်း မေမေ့ကို နှုတ်ဆက်သည်။
“မေမေ… သွားတော့မယ်နော်..တာ့တာ.. နောက်၂ရက်နေရင် ပြန်တွေ.မယ်… I love you..”
“အေး..အေး..လမ်းခရီး ဂရုစိုက်နော်..ဟဲ့… အိတို.၊ မိစံတို. သူငယ်ချင်းကို ဂရုစိုက်လိုက်ကြဦးနော်…မေမေသွားပြီ..”
မေမေထွက်သွားတော့မှ ဘေးဘီကိုကြည့်မိသည်။ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ကျွန်တော်မသိတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်… ပြီးမှ စဉ်းစားမိသည်။ ဟုတ်တာပေါ့ ကျွန်တော်တို.က ၇ယောက်ဆိုတော့ တစ်ယောက်ကတော့ တခြားလူနဲ့ ထိုင်ရမှာပေါ့။ ဟင်း… ကျွန်တော့်ကျမှ ဘာလို. သူများနဲ့ ထိုင်ရလဲ မသိ…
အိအိနဲ့ အ၀င်းတို. မုန့်ဆင်းဝယ်ကြရင်း ခုမှ ကားပေါ်တတ်လာသည်။
“ဟဲ့ ..ငလင်း..နင့်ကို မိတ်ဆက်ပေးဖို.မေ့နေတာ.. နင့်ဘေးမှာ ထိုင်နေတာက ပုံ.ပုံ.၊ သူက ငါ့ငယ်သူငယ်ချင်း၊ ငါတို့ မူဆယ်ကဘဲ၊ သူက ကျိုက်ထီးရိုးမရောက်ဖူးလို. လိုက်လည်တာ၊ ငါတို.ကလဲ ၇ယောက်ဆိုတော့ ဘက်ပဲ့နေမှာစိုးလို. သူ.ကိုပါခေါ်လာတာ၊ နင် သူ.ကိုဂရုစိုက်လိုက်နော်..”
အိအိက ကျွန်တော့်ကို ရှည်ရှည်လျားလျားပြောရင်း မောသွားဟန်နှင့် အ၀င်းဘေးမှာ ၀င်ထိုင်သည်။
အခုလိုဆိုတော့လဲ ကောင်းသားဘဲ။ အားလုံးက သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။ သူစိမ်းနဲ့ ထိုင်ရတာထက်စာလျင် တစ်ဖွဲ.တည်းသွားသူချင်းတူတူ ထိုင်ရသည်က ပိုကောင်းလေသည်။
ခုတော့ အ၀င်းနဲ့ အိအိက ရှေ.ဆုံးက၊ သူတို.နောက်မှာ မိစံနဲ့ သူသူ၊ အဲဒီနောက်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ ပုံ.ပုံ.၊ ကျွန်တော်တို.နောက်က လွတ်နေသည့်ခုံကတော့ ဇာဇာနဲ့ ဖြိုးအတွက်။
“ဝေး….. “ ဘာရယ်မဟုတ် ကျွန်တော်တို.တွေ စိတ်လှုပ်ရှားစွာအော်မိကြသည်။
ဟုတ်တယ်လေ.. ဒီခရီးက ကျွန်တော်တို.အတွက် ပထမဆုံး လူကြီးမိဘမပါဘဲ သွားခွင့်ရသောခရီး၊ လူကြီးဘ၀ကိုဝင်ခါစ ဆယ်ကျော်သက် ကျွန်တော်တို.အတွက်ကတော့ တကယ့် တိုက်ပွဲကြီးကို သွားရသော စစ်သူရဲကောင်းကြီးတွေလို အားနှင့်မာန်နှင့်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ယုံကြည်မှုတွေအပြည့်…
“ငလင်း.. နင့်မားသားကြီးက ဘာမုန်.တွေထဲ့ပေးလိုက်လဲ” မိစံက လှမ်းမေးသည်
“နင်ကလဲ ကားကခုမှထွက်တာ ဗိုက်ဆာနေပြန်ပြီလား..” ကျွန်တော်က သူ့ကိုအော်နောက်ရင်း မေမေထည့်ပေးလိုက်သော သရေစာမုန်.ထုပ်ကို ဖွင့်သည်။
မိစံက သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အ၀ဆုံးနှင့် အမြဲဆာနေတတ်သူ။ ချစ်စရာကောင်းသလောက် အငြင်းသန်သူက သူသူ။
“ရော့…ငါးမုန့်ကြော်ပါတယ်..” မိစံကို မုန်.လှမ်းပေးသည်။
“နင့်မှာ အချဉ်ထုပ်မပါဘူးလား” အိအိက ရှေ.ဆုံးမှ လှမ်းမေးသည်။
“ငါက နေကြာစေ့” သူသူကလဲ မေးသည်။
“နင်တို.က ငါ့ကို ကားပေါ်မှာ ဈေးလိုက်ရောင်းတဲ့သူများထင်နေတာလား” ကျွန်တော် ဘုတောတောပြီး လက်ကတော့ သူတို.တောင်းသမျှကို လိုက်ဝေနေမိသည်။ သူတို.ကလဲ ကျွန်တော်အော်တာလောက်ကို နားထဲမရောက်ပုံနှင့် ခပ်တည်တည် လက်ထဲကမုန်.တွေ မလုရုံတမယ် ဆွဲယူကြသည်။
ပြီးမှ ကျွန်တော်သတိရသွားတာက၊ ဘေးကကောင်မလေး…
“ပုံ.ပုံ. နင်ရော ဘာစားမလဲ… “ မေမေထဲ့ပေးလိုက်သော မုန်.ထုပ်ကြီးကို သူ.ရှေ.ထိုးပေးလိုက်သည်။
သူကလဲ ရှက်မနေ၊ အိုက်တင်များမနေဘဲ ရှမ်းမဆီးသီးထုပ်ကို ရွေးယူသည်။ ကျွန်တော်လဲ သူ.ကိုသဘောကျသွားသည်။ ဟုတ်တယ်လေ… သူငယ်ချင်းတွေ ခရီးသွားတာ ပဲများနေစရာမှ မလိုတာ။
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ Oishi ထုပ်ကို ယူပြီး၊ ကျန်တာတွေ ပြန်သိမ်းထားရင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေ ရှေ.ခုံ၊ နောက်ခုံ အော်ဟစ် စကားပြောကြသည်။ ကားပေါ်ကလူတွေကတော့ ကျွန်တော်တို.ကို အမြင်ကတ်စွာနှင့် ကြည့်နေကြသည်။
လူတင်၊ လူချလုပ်ပြီး ကားက ကြာကြာမရပ်ချေ။ ခက်တာက ဇာဇာနှင့် ဖြိုးက ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိ။ သူတို.၂ယောက်က လိုက်လဲလိုက်ဖက်လွန်းသည်။ ဘယ်တော့မဆို ချိန်းထားရင် နောက်ဆုံးမှ ရောက်တတ်သူတွေ။ ခုလဲ ကားချိန်ကိုမမှီ။ ဖုန်းခေါ်ရအောင်လဲ တစ်ယောက်မှ ဟန်းဖုန်းကိုင်နိုင်လောက်အောင် မချမ်းသာကြ။
“အားလုံးဘဲ ကျေးဇူးပြုပြီး နားထောင်ပေးကြပါ။ ကျွန်တော်တို.သူငယ်ချင်း ကားမမှီလို.၊ ကားထွက်သွားပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပြောချင်လို. ဟမ်းဖုန်းပါရင် ခဏလောက်ငှားပေးပါလို. …. အဟဲ…”
ရယ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ပြောနေသော ကျွန်တော့်ကို အားလုံးက ၀ိုင်းကြည့်သည်။ ငယ်သေးလို.လားမသိ ကျွန်တော် လုံးဝမရှက်..
“ ဒီက ဖုန်းကို ယူသုံး..” နောက်ဆုံးတန်းက အစ်ကိုတစ်ယောက်က သူ.ဟန်းဖုန်းလှမ်းပေးသည်။
“အေး… ပြီးရင်တော့ မင်းတို.ငြိမ်ကြတော့ကွာ.. တစ်ကားလုံး မင်းတို.အသံချည်းဘဲ..”
ထိုအစ်ကိုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲစကားကြောင့် အားလုံး ရီလိုက်ကြသည်။ အခုမှာ ဗိုလ်တထောင်ကနေ မြေနီကုန်၇ှိသေးသည်၊ တစ်ကားလုံး ကျွန်တော်တို.အဖွဲ.ကို လန်.နေပြီထင်တယ်…
“အန်တီ ကျွန်တော် လင်းလင်းပါ၊ ဇာဇာနဲ့ ပြောချင်လို.၊
ကားဂိတ်မှလဲ မတွေ.လို. လှမ်းမေးတာ..ကျေးဇူးပါ အန်တီ”
ဇာဇာ့အိမ်က ဇာဇာတို.၂ယောက်ထွက်သွားကြပြီဟုပြောသည်။ ဇာတ်လမ်းက ပြီးပြီ။
ဟို၂ကောင်ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိ။ ကားကလဲ ထွက်လာတာ ၈မိုင်နားရောက်နေပြီ။ မတတ်နိုင်တော့ စိတ်ဒုန်းဒုန်းချပြီး၊ ဟိုအစ်ကိုကို ဖုန်းပြန်ပေးကာ ကျေးဇူးတင်စကားထပ်ပြောသည်။ ပြီးတော့ ကတိအတိုင်း ငြိမ်ငြိမ်နေရင်း တိုးတိုး တိုးတိုးစကားပြောကြသည်။ ခဏနေတော့ ငြီးငွေ.လာကြပြီး ကိုယ့်ဘေးကလူသာ ကိုယ်ပြောကြတော့သည်။
“နင်က မူဆယ်ကနော်..” Oishi တစ်ဖတ် ပါးစပ်ထဲထည့်ဝါးရင်း ကျွန်တော် ပုံ.ပုံ.ကို မေးသည်။
“အေး… မနှစ်ကထိ မူဆယ်မှာ၊ ဒီနှစ်တော့ ရန်ကုန်ပြောင်းလာတယ်.. ငါက အီကိုတတ်နေတယ်..”
“သြော်.. ရွာသာကြီးကပေါ့” ကျွန်တော်က ပြုံးစစနဲ့မေးသည်။
“အင်း..” သူမ နှုတ်ခမ်းကို စူရင်းပြန်ဖြေသည်။
ဒီလိုပါဘဲ အီကိုက အလှဘုရင်မလေးတွေက သူတို.ကို ရွာသာကြီးကလားဟုတ်မေးရင် သိပ်မကြိုက်ချင်၊ ဟုတ်သည်လေ.. ရွာသာကြီးဆို အရူးထောင်လို.ဘဲ တွေးမိကြတာကိုး။
“နင်က သန်လျင် GTC ကနော်..”
“အေး… ငါတို.တစ်ဖွဲ.လုံး တူတူဘဲ”
ကျွန်တော်တို.၂ယောက် စကားစခဏပြတ်သွားသည်။ ပြီးမှ သူက
“နင့် မေမေ နင့်ကို လိုက်ပို.တာလား”
“အေး.. ဟုတ်တယ်။ မေမေက ငါ့ကို ဘယ်တော့မှ မယုံလို. သေချာတဲ့အထိလိုက်ပို.တာ”
သူမက ပြုံးရင်း “နင်က ဆိုးလို.နေမှာပေါ့”
“သူ့အတွက်တော့ ဟုတ်ရင် ဟုတ်မှာပေါ့၊ ငါ့အတွက်တော့ မဟုတ်ဘူး”
နှစ်ယောက်တူတူ မတိုင်ပင်ဘဲ ရယ်မိကြသည်။ ရယ်ရင်းကြည့်မိတော့…အိုး…သူမနှုတ်ခမ်းတွေတင်မဟုတ်၊ မျက်လုံးတွေကပါ ရယ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူမမျက်ဝန်းလေးတွေက လှလိုက်တာ… တကယ်ပါဘဲ အီကိုကကောင်မလေးတွေ လှတာ ယုံသွားပြီ…
Posted by Tommy Girl at 6:32 AM
Labels: Love Trip